''ကျွန်တော့်ကို မုန်းသူပဲဖြစ်စေ ချစ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်စေ ကျွန်တော်ကတော့ အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်'' နေမင်း - Yangon Media Group
”ကျွန်တော့်ကို မုန်းသူပဲဖြစ်စေ ချစ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်စေ ကျွန်တော်ကတော့ အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်” နေမင်း
မကြာသေးခင်ကမှ မေးရိုးနှစ်ဖက်ကိုခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်နေမင်းနှင့်တွေ့ဆုံခိုက် ခွဲစိတ်မှုအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အခုလိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်၊၊
မေး – မျက်နှာခွဲစိတ်လိုက်တာ အခုဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော့်မျက်နှာက အများကြီးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ ဟိုဘက်ဒီဘက်ဘေး လေးတွေနည်းနည်းညှိလိုက်တဲ့ သဘောမျိုးလောက်ပါပဲ။
မေး – မျက်နှာခွဲစိတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုများတာတွေကို ဘယ်လိုပြောချင်လဲ။
ဖြေ – အဲ့ဒါကတော့လည်း လူတွေဆိုတာက သူတို့ရဲ့ Right တစ်ခုအရ သူတို့ကြိုက်သလိုပြောခွင့်ရှိပါတယ်။ မှန် သည်ဖြစ်စေ၊ မှားသည်ဖြစ်စေ သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက် အတိုင်းပြောခွင့်ရှိတယ်။ ဘယ်လိုပဲပြောပြော သူတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ကိုနေရာလေးတစ်ခုပေးလိုက် တာကို တော်တော်ကျေနပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို မုန်းသူပဲဖြစ်စေ ချစ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်စေ ကျွန်တော် ကတော့ အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်။
မေး – မျက်နှာရဲ့ဘယ်အပိုင်းကို ခွဲစိတ်ဖြစ်တာလဲ။
ဖြေ – ခွဲစိတ်တာကတော့ ကျွန်တော်မေးရိုးတစ် ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မညီတာကိုညှိလိုက်တာပါ။ ပထမတုန်းကမေးရိုးတစ်ဖက်မှာ ဘုလေးထွက် နေတာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါလေးတွေကို ညှိလိုက် တာပါ။
မေး – နောက်ထပ်ရော ခွဲစိတ်သွားဖို့ရှိဦးမလား။
ဖြေ – နောက်ထပ်လည်းမလုပ်ဖြစ် လောက်တော့ပါဘူး။ ဒါလုပ်ဖို့တောင် တော်တော်လေးကို စဉ်းစားတယ်။ တိုက်ဆိုင်သွားလို့လည်း လုပ်ဖြစ်တာပါ။ ဒါက ဟိုးအရင် ကျွန် တော်မင်းသားမလုပ်ခင် နိုင်ငံ ခြားမှာကတည်းက ပြောဖြစ် ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ ပါဘူး။
မေး – အခုအသံကရော ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ – အရင်တုန်းက ကျွန်တော်စကား ပြောရင် ပါးစပ်ကအရမ်းဟလို့မရဘူး။ ပါးစပ်မှာတစ်ခုခု ခုနေတယ်လို့ခံစား ရတယ်။ အရမ်းအကျယ်ကြီးဟ လိုက်ရင် တစ်ခုခုကို ကိုက်မိသလို ခံစားရတယ်။ အခုအဲ့ဒါကမဖြစ် တော့ဘူး။ အခုက ချုပ်ရိုးဖြေ ထားတာ တစ်လပဲရှိသေးတော့ အသံကတော့ ပုံမှန်မဖြစ်သေးပါဘူး။ ခြောက်လလောက်ကြာမှ ပုံမှန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ အသံကပို ကျယ်လာမှာပါ။
မေး – မခွဲစိတ်ခင်တုန်းကရော ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲ။
ဖြေ – အရင်တုန်းက အံကြိတ်ပြီးစကားပြောတယ်ဆို တာက ထိန်းပြီးပြောရတာပါ။ ထမင်းစားရင်လည်း ပါးကို ကိုက်မိတယ်။ အကြောမလွတ်တာလားမသိဘူး။ အခုဟာက ပါးစပ်ဟလိုအဆင်ပြေတယ်၊ အဆင်ပြေတာတော့များပါ တယ်။
မေး – ပရိသတ်တွေကိုရော ဘာတွေပြောချင်လဲ။
ဖြေ – ခုနကပြောသလိုပဲ ကျွန်တော့်ကိုဘယ်လိုပဲပြော ပြော ကျွန်တော့်အတွက်အချိန်ပေးပြီး ပြောပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူဆိုတာကတော့ ကိုယ်လုပ်စရာရှိ တာတွေကိုလုပ်နေရမှာပါပဲ။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း ကိုယ်လုပ်တတ်သလောက် ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက်ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ လုပ်ကိုင်သွားမှာပါ။ ကျန်တဲ့အကောင်း မြင်တာတွေ အဆိုးမြင်တာတွေ အကုန်လုံးဘယ်လိုပဲပြော ပြော ဒီလိုပြောဖို့အတွက် ကျွန်တော့်ကိုအချိန်ပေးပြီးပြော ပေးကြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး၌ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ပါက ခိုလှုံနိုင်ရန် Cyclone Shelter ၅၇လုံး ထပ်မံ တည်ဆောက်နေ
''Mulan'' ရုပ်ရှင်ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ အားပေးမှုရရှိရန် Disney ကြိုးပမ်းနေ
ကော်မရှင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂ဝ၁၇ ကြားဖြတ်ထက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အားနည်း ဟုဆို
ပြည်တွင်း ပဲစားသုံးမှု မြင့်တက်လာစေမည့် နည်းလမ်းတစ်ခု အဖြစ် ပဲစင်းငုံနှင့် မတ်ပဲ ခွဲခြမ်းမ??
အမျိုးသားလွှတ်တော် ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီနှင့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တို့ ပူ??
Kpop ဂီတဗီဒီယိုများထဲတွင် ကြည့်ရှုမှုအကြိမ် ပထမဆုံး သန်း ၉၀၀ ကျော်ခဲ့သည့် BLACKPINK အဖွဲ့၏ ‘Ddu-du Ddu-du’ သီချင်း
အီရန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် ရေကြီး၊ ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၁ဝဝ နီးပါး ဒဏ်ရာရ